Ahoana ny fomba hamoronana ny volonao amin'ny Photoshop: inona izany | Famoronana an-tserasera
Indraindray ianao tsy te hampiasa ireo firafitra na endrika hitanao amin'ny Internet fa aleonao ihany manao azy. Tsy dia lavitra loatra izany ary, amin'ny maha-mpamorona anao dia tokony ho vonona ianao raha sendra mila mamorona zavatra avy hatrany ny client, na ny tenanao. Ahoana no ahafahan'ny grunge firafitra, izay no mahaliana antsika amin'ity raharaha ity.
Ny firafitra grunge dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, na dia mety tsy ho toa anao aza ny anarany. Fa ahoana no anaovanao azy amin'ny Photoshop? Raha te hanandrana hanao izany ianao dia holazainay aminao hoe inona avy ireo dingana tokony hataonao hahatratrarana azy.
1 Inona no atao hoe grunge
2 Fomba fanamboarana grunge amin'ny Photoshop
2.1 Sokafy ny Adobe Photoshop sy fisie vaovao
2.2 Ataovy avo roa heny ny sosona
2.3 Ny sivana rahona
2.4 Ovao ny sary
2.5 Grunge Texture: Layer fanitsiana
2.6 Famirapiratana sy fifanoherana
2.7 Grunge Texture: Mamorona lamina
2.8 Ampiasao ny fitaovana borosy hanalana ny kilema
2.9 Manaova fanamarinana
3 Ahoana raha tsy tiako ny valiny mahazatra?
Inona no atao hoe grunge
Efa nandre momba ny firafitry ny grunge ve ianao? Fantaro inona izany? Amin'izao fotoana izao, io dia iray amin'ireo fironana mafana indrindra eo amin'ny mpamorona. Ary izany dia satria manome anao vokatra voajanahary sy azo tanterahina ary miaraka amin'ny fahatsapana fanoherana. Ary koa, satria ampiasaina indrindra amin'ny fiaviana izy io, dia ialana amin'ny tsy maintsy fampiasana ambadika fotsy, fotsy na matevina, fa kosa mampiasa fitambaran'olona maromaro hamoronana lamina tokana.
Noho izany, azontsika atao ny mamaritra ny grunge firafitra toy ny volon-taratasy miloko endrika fa amin'ny fomba sasany izay tsy mahasosotra, Tsy toy izany. Ny zavatra mahazatra dia ny fanaovana azy amin'ny loko mainty sy fotsy, fa raha ny tena izy dia azo atao amin'ny loko ihany koa izy io, ary ampiasaina amin'ny 3D aza mba hamoronana loko sy endrika hafa izay manome halaliny kokoa.
Fomba fanamboarana grunge amin'ny Photoshop
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa momba ny firafitry ny grunge, tonga ny fotoana hianaranao mamorona azy amin'ny Photoshop. Manomboka izao dia lazainay aminao fa mora be izany, saingy tsy maintsy manaraka ny dingana ianao mba tsy hanao fahadisoana ary hitranga araka ny tokony ho izy.
Sokafy ny Adobe Photoshop sy fisie vaovao
Ny dingana voalohany tokony hataonao dia, amin'ny solosainao (PC na solosainao finday), sokafy ny programa Photoshop anananao ary omeo izy hanokatra fisie vaovao. Eto dia azonao atao ny mamaritra ny habe tadiavinao, satria tsy misy refy manokana, miankina amin'ny zavatra ilainao ny zava-drehetra.
Mazava ho azy, ny firafitra dia matetika atao amin'ny endrika efajoro, satria taty aoriana, rehefa mampitombo ny habeny, na manao kopia azy ireo, dia mifangaro tsara kokoa noho ny hoe mahitsizoro.
Manoro hevitra anao izahay mba hamela anao ho foana foana.
Ataovy avo roa heny ny sosona
Efa fantatrao fa ny menio sosona dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny Photoshop, ary tsy ho latsa-danja kokoa izany rehefa mamorona endrika grunge. Ny tsy maintsy ataonao dia ny manaova an'io sosona fotsy io izay anananao.
Araka izany, ao amin'ny Ny menio sosona dia hahazo roa ianao, ny voalohany, izay mihidy matetika, ary kopia iray amin'izany. Ao amin'io kopia io, manondro azy miaraka amin'ny cursor, dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra ankavanana ary Avadiho ho zavatra marani-tsaina.
Ny sivana rahona
Ny fananana an'io sosona io dia ilay hiarahanay hiasa dia tokony ho azonao antoka fa mainty sy fotsy ny lokony sy ny loko eo alohany. Raha tsy izany dia ovao vetivety izy ireo ary, ankehitriny, hametraka sivana rahona amin'ilay sosona isika.
Noho izany, Sivana / adika / rahona. Araka izany, ho hitanao fa miova tanteraka izy io ary haneho anao sary toa ny rahona be (ary tena manakaiky ny rahona).
Efa fantatrao fa arakaraky ny ampiharanao ny sivana no vao miova ny antony, ka raha somary mitaky ianao dia manohiza mandra-pahazoanao ny valiny tadiavinao Ny mahazo anao toy izao dia firafitra tsy azo ovaina, fa io no dingana voalohany ahatsoboka.
Ovao ny sary
Manaraka, ary amin'ny fampiasana ny sivana izay tonga ao amin'ny Photoshop indray, dia mila manova kely ny sary ianao, ary manisy sivana distorsiôna indrindra. Ohatra: Filter / Distort / Ripple.
Nifidy an'ity iray ity izahay, saingy azonao atao ny mametraka ilay tianao. Raha ny habetsahana dia azonao atao ny misafidy ny isa tadiavinao (amin'ny 800 dia toa tsara izany matetika) sy ny habeny amin'ny lehibe. Omenay OK.
Grunge Texture: Layer fanitsiana
Manaraka izany, tsy maintsy mamorona sosona fanitsiana ianao. Mba hanaovana izany: Layers / Layers fanitsiana / haavo. Tsindrio OK (satria ny soatoavina izay mivoaka dia ampy ary apetraka ao amin'ny Properties, ao amin'ny tontonana, haavo 24. Farany, kitiho ny Posterize dia ho hitanao ny valiny (izay mbola tsy ny farany).
Famirapiratana sy fifanoherana
avy eo mila manova ny famirapiratana sy ny fifanoheran'ny sosona ianao. Mba hanaovana izany, mamporisika anao izahay hampidina ny famirapiratana (ka -15) ary hampitombo ny fifanoherana (hatramin'ny +20). Hahatonga ny endriny ho mafimafy kokoa izany, fa aza matahotra, tsy io no farany.
Apetaho eo amin'ny Blend hita ny sosona ary mankanesa any amin'ny Filter / Sharpen / Sharpen More.
Grunge Texture: Mamorona lamina
Ankehitriny dia mila mamorona lamina iray ianao hamita ny firafitry ny grunge izay ataonao. Mba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny Filter / Other / Offset. Fa maninona no tsy maintsy ataonao? Eny, mba hiangona eo afovoany ireo zorony, ary zava-dehibe izany satria, amin'izany fomba izany, rehefa mandika ny endriny ianao dia tsy ho toy ny mamerina ilay lamina ianao fa toa iray ihany.
Ampiasao ny fitaovana borosy hanalana ny kilema
Mba hamaranana dia mila fotsiny ianao ampiasao ny fitaovana borosy hanesorana izay toa tsy mety amin'ny famolavolana. Ary ho vonona izany.
Raha vantany vao tianao ny vokany, tonga ny fotoana hikatsahana ny modely Edit / Define. Ny hataon'ity dia ny fitehirizana an'io lamina io ho toy ny Grunge Texture, ka tsy mila manao azy intsony ianao raha tsy tianao.
Farany, tsy maintsy manokatra fisie vaovao ianao, raha roa na telo heny ny haben'ny endrikao, hahitanao ny fomba miverimberina ilay lamina ary raha misy lesoka tokony ahitsinao alohan'ny hanolorany azy amin'ny client.
Ahoana raha tsy tiako ny valiny mahazatra?
Iray amin'ireo lehibe tombony amin'ny fianarana manao endrika anao manokana dia ny hoe tsy mila mionona amin'ireo izay hitanao ianao, na manaraka ny fampianarana momba ilay taratasy. Izany hoe, raha mbola manana ny fototra hamoronana ity firafitra ity ianao dia afaka manamboatra ireo fanovana izay tadiavinao hahazoana ny valiny izay mahafa-po anao indrindra.
Ny zava-dehibe dia ny fahalalana ireo dingana, ary avy eo dia mila mampiasa famoronana fotsiny ianao hamoronana ny volavolanao manokana mifototra amin'io firafitra grunge io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana no fomba hamoronana ny grunge amin'ny Photoshop